2 Beresosɛm 11 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Beresosɛm 11:1-23
11 Bere a Rehoboam beduu Yerusalem+ no, ntɛm ara na ɔboaboaa Yuda ne Benyamin+ fie nnɔmmarima a wɔapaw wɔn, mpem ɔha aduɔwɔtwe,+ ano sɛ wɔne Israel rekɔko na wɔasan adan ahenni no ama Rehoboam. 2 Ɛnna Yehowa asɛm baa nokware Nyankopɔn nipa Semaia+ nkyɛn sɛ: 3 “Ka kyerɛ Solomon ba Rehoboam, Yuda hene,+ ne Israelfo a wɔwɔ Yuda ne Benyamin nyinaa sɛ, 4 ‘Nea Yehowa aka ni: “Mo ne mo nuanom nnkɔko.+ Obiara nsan nkɔ ne fie, na me na mama asɛm yi aba saa.”’”+ Enti wotiee Yehowa asɛm, na wɔne Yeroboam ankɔko.+ 5 Na Rehoboam tenaa Yerusalem, na ɔkyekyee nkurow a ɛyɛ den wɔ Yuda. 6 Nkurow a ɔkyekyee ni: Betlehem,+ Etam,+ ne Tekoa,+ 7 Bet-Sur,+ Soko,+ ne Adulam,+ 8 Gat,+ Maresa,+ ne Sif,+ 9 Adoraim, Lakis,+ ne Aseka,+ 10 Sora,+ Ayalon,+ ne Hebron,+ nkurow a ɛyɛ den a ɛwɔ Yuda ne Benyamin nsase so. 11 Afei nso ɔhyehyɛɛ nkurow no den,+ na ɔde mpanyimfo+ sisii ano, na osisii aduan ne ngo ne nsã adekora adan wɔ hɔ, 12 na ɔde akyɛm akɛse+ ne mpeaw+ guu nkurow a aka no nyinaa nso mu; ɔmaa nkurow no yɛɛ den paa. Na Yuda ne Benyamin de, na wɔda so wɔ n’afã. 13 Na asɔfo ne Lewifo a wɔwɔ Israel nyinaa fi wɔn nkurow mu begyinaa n’akyi. 14 Lewifo no gyaw wɔn mfikyisase+ ne wɔn agyapade,+ na wɔbaa Yuda ne Yerusalem+ efisɛ na Yeroboam+ ne ne mma apam wɔn+ sɛ wonnni Yehowa asɔfo bio. 15 Na ɔhyehyɛɛ n’asɔfo maa sorɔnsorɔmmea+ no ne adaemone mmirekyi*+ ne nantwi mma a wayɛ no.+ 16 Na wɔn akyi no, wɔn a wɔde wɔn koma mae sɛ wɔbɛhwehwɛ Yehowa, Israel Nyankopɔn no fi Israel mmusuakuw nyinaa mu baa Yerusalem+ sɛ wɔrebɛbɔ afɔre+ ama Yehowa, wɔn agyanom Nyankopɔn no. 17 Wogyinaa Solomon ba Rehoboam akyi mfe abiɛsa, na wɔmaa Yuda ahenni yɛɛ den,+ efisɛ wɔnantew Dawid ne Solomon kwan so mfe abiɛsa.+ 18 Na Rehoboam waree Mahalat a ɔyɛ Dawid ba Yerimot babea. Ná Yerimot yere ne Mahalat maame Abihail a ɔyɛ Yese ba Eliab+ no ba. 19 Ɔwoo Yeus, Semaria, ne Saham maa no. 20 Na ɛno akyi no, ɔwaree Absalom+ banana Maaka,+ na ɔwoo Abia,+ Atai, Sisa, ne Selomit maa no. 21 Rehoboam dɔɔ Absalom banana Maaka sen ne yerenom+ ne n’ayefam a wɔaka no nyinaa; ɔwaree yerenom dunwɔtwe ne ayefam aduosia, na ɔwoo mmabarima aduonu awotwe ne mmabea aduosia. 22 Na Rehoboam de Maaka ba Abia dii ne nuanom anim yɛɛ no wɔn so panyin, efisɛ na ɛwɔ ne tirim sɛ obesi no hene. 23 Nanso odii no nyansam,+ na ɔde ne mma no binom nso totoo Yuda ne Benyamin+ nsase nyinaa ano, nkurow a wɔagye ho ban+ no, na ɔmaa wɔn nnuan pii,+ na ɔwarewaree yerenom bebree momaa wɔn.+
^ Hwɛ Le 17:7 ase hɔ asɛm.
2 Beresosɛm 11